Fihenan'ny mpianatra Hulu | Miaraka amin'ny Spotify Premium (2020) - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Hulu amin'ny taona 2020?
Hulu dia sehatra iray tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa te hiaina fialam-boly manara-penitra amin'ny vidiny mirary. Fantatra amin'ny tranombokiny midadasika io tranonkala io ary manana atiny betsaka atolotra ny mpanjifany. Afaka manomboka mijery haingana ny sasany amin'ireo seho tianao indrindra ianao nefa tsy manahy. Ny drafitry ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia manampy ireo mpianatra tanora te-hitrandraka betsaka amin'ny volany. Ireo mpianatra izay eo amin'ny faha-dimy taonany sy roapolo taonany dia zara raha mahay mitantana ara-bola.
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia mety ho fomba lehibe hampihenana ny adin-tsaina amin'ny ara-bola. Manomboha mandoa vola kely kokoa noho ny fialambolinao anio miaraka amin'ity tetika ity. Amin'ity toro-lalana ity dia ho hitanay ny fomba hampihenanao ny famandrihanao.
Fihenan'ny mpianatra Hulu - Fampahalalana fohy
Hulu sy Spotify dia niara-niasa mba hanome tombony fanampiny ho an'ny mpianatra. Afaka mahazo fialamboly mozika sy horonan-tsary ianao izao amin'ny famandrihana iray. Manampy amin'ny fitehirizana vola be izany. Raha tsy fantatrao, Spotify dia serivisy mivantana mozika an-tserasera. Nahazo fidirana amin'ny premium Spotify, Hulu (tohanan'ny doka), ary fampisehoana rehetra ambanin'ny elo ny mpampiasa. Vahaolana ara-bola mety ho an'ny mpianatra te-hihary vola izany. Amporisihinay ny mpamaky anay rehetra izay te-hahazo bebe kokoa.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ity famandrihana ity dia ny fahazoanao maimaim-poana an'ity mandritra ny telo volana. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy ny fihemorana amin'ny fampiasana ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Mahazo miditra amin'ny fialamboly tsy misy farany ianao amin'ny fisoratana anarana telo.
Vidin'ny fihenan'ny mpianatra Hulu:
Ny fihenan'ny mpianatra dia mampihena be ny vidin'ny fialamboly. Afaka mankafy serivisy telo ny mpampiasa amin'ny vidiny latsaky ny iray. Ny ampahany tsara indrindra dia ny telo volana voalohany dia fotoam-pitsarana. Tsy homena vola ianao mandritra an'io fotoana io. Ity dia fomba tsara hanangonana vola amin'ny fandanianao fialamboly. Ny serivisy telo dia misy amin'ny $ 4.99 + haba aorian'ny telo volana. Amin'izao andro izao dia misy tranokala marobe misosa amin'ny Internet. Raha mividy isaky ny fihodinana ianao, dia hiafara amin'ny fantsom-pitaka lehibe eo amin'ny kitapom-bolanao.
Ahoana ny fomba hahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Hulu?
Ny fihenan'ny mpianatra Hulu dia mora zahana ho an'ireo mpianatra te-hihary ny volany. Azonao atao ny mandany ny vola voangona any amin'ny toeran-kafa. Ny fomba iray lehibe kokoa hitehirizana dia ny fizarana ny volavolan-dalàna amin'ireo namana vitsivitsy. Misy ferana tokoa ny fampiasana Hulu amin'ny fitaovana maro. Ireto ny dingana ahafahanao mamela ny fihenam-bidy.
Takiana amin'ny mpampiasa ny fanombohana ny «browser» amin'ny solosainy. Hita amin'ny tranokala ofisialin'ny Spotify ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Ny tranokala Hulu dia tsy manana famatsiana hahafahana misoratra anarana amin'ny drafitra fonosin'izy ireo. Tsindrio ity rohy manaraka ity - https://www.spotify.com/us/student/ . Hitondra anao mankany amin'ny pejin'ny mpianatra.
Ao amin'ny pejy fandraisana dia ho hitanao ny bokotra 'mahazo maimaim-poana mandritra ny telo volana'. Tsindrio eo raha hanomboka amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana. Takiana ny fisoratana anarana amin'ny kaonty vaovao amin'ny sehatra ireo mpampiasa. Ity dia fomba tsara hanombohana ny fizotrany.
Ny mpampiasa dia mila miditra amin'ny kaonty Spotify efa misy na mamorona kaonty vaovao. Azonao atao ny miditra amin'ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy toy ny Facebook na Apple ID koa. Raha tsy manana kaonty ianao dia kitiho ny bokotra 'sign up for Spotify'.
Raha vantany vao namorona kaonty eo amin'ny lampihazo ianao dia afaka mampiasa ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Spotify dia mampiasa rafitra fanamarinana hanamafisana raha mpianatra mavitrika ianao. Ny fizotry ny fanamarinana dia maharitra ora vitsivitsy, miankina amin'ny oniversite anao. Ireo mpampiasa dia afaka manamarina ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny oniversite raha sendra misy olana.
Vantany vao voamarina tsara ny kaonty dia afaka mandoa ny vola ny mpampiasa. Spotify sy Hulu dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny carte de crédit sy debit. Azonao atao koa ny mampiasa Paypal hisoratra anarana amin'ny serivisiny. Ity dia fomba tsara hanombohana fahazoana fialamboly tsara kalitao amin'izao andro izao. Ataovy ny fandoavam-bola ary atombohy hampiasa tsy misy ezaka ny Hulu. Ny vola dia hanampy amin'ny manaraka. Ny vola $ 4.99 dia hesorina aorian'ny fotoam-pitsarana telo volana.
Arahabaina! Nahomby taminao ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Hulu ao amin'ny kaontinao. Ireo mpampiasa dia afaka mampihetsika ny kaonty Hulu avy amin'ny fipetrahana Spotify. Ilay kinova io ihany dia afaka miasa amin'ny sehatra rehetra.
Ahoana ny fomba hanamarinana ara-tanana ny fihenan'ny mpianatra Hulu?
Mpampiasa maro no mety hiatrika ny lesoka fanamarinana. Spotify dia mampiasa fitaovana mandeha ho azy mba hiantohana faingana ny famandrihana premium. Ny maody fanamarinana amin'ny tanana dia manampy ihany koa ho an'ireo olona tsy afaka hamarinina. Eto ianao dia tsy maintsy manome ny fampahalalana ilaina momba ny oniversite na oniversite anao. Amin'ny ankapobeny ny tranokala Spotify dia hanamafy raha mianatra amin'ny mazoto mavitrika ianao na tsia. Izy io dia miasa tsara amin'ny ankamaroan'ny oniversite any Etazonia. Hulu dia mampiasa ny fizotran'ny fanamarinana mitovy ho an'ireo mpanjifany mpianatra. Takiana aminao ny mandefa ireo antontan-taratasy ho an'ny fidirana amin'ny oniversite anao.
Ny karatra karapanondrana tsotra dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny mpampiasa dia afaka manindry sary amin'ny alàlan'ny findainy ary mampakatra azy eo amin'ny lampihazo ho fanamarinana amin'ny tanana.
Mandra-pahoviana no misy ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra?
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Hulu sy Spotify dia azo alaina ho an'ny mpampiasa hatramin'ny 30 Jona 2020. Tokony hanao zavatra araka ny toetranao ianao ary hahazo ny famandrihana anio. Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no tara loatra izany. Ny tolotra dia fotoana iray indray mandeha ho an'ny olona mandany fotoana betsaka amin'ny Internet. Raha vao misoratra anarana amin'ny fihenam-bidy ianao dia afaka mahazo ny tombony afaka herintaona. Maimaimpoana ny telo volana voalohany. Rehefa tapitra ny fotoam-pitsarana dia tsy maintsy mandoa ny famandrihana ireo mpampiasa mandritra ny sivy volana manaraka.
Iza no azo ekena amin'ny fihenam-bidy?
Izay mianatra amin'ny oniversite na oniversite any Etazonia dia afaka miditra amin'ny drafitry ny mpianatra. Voamarina ho azy ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny rafitra SheerID. SheerID dia tahiry fisoratana anarana ho an'ny mpianatra izay mifandray amin'ny ankamaroan'ny toeram-pampianarana. Ataon'izy ireo eo noho eo ny fizotran'ny fanamarinana ho an'ny tranonkala. Manana serivisy fanamarihana hafa koa izy ireo, toy ny miaramila, mpitsabo mpanampy ary dokotera. Goavana tokoa ny tahiry, ka ho hitanao fa manamarina mora foana ianao.
Hulu dia sehatra fialamboly tsara ho an'ny olona manerantany. Betsaka ny mpamaky no mety manana fisalasalana momba ny drafitry ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Amin'ity toro-lalana ity dia manantena izahay fa hamaly ny fanontanianao rehetra. Ankafizo ny streaming atiny avo lenta amin'ny fitaovanao rehetra anio amin'ny vidiny mirary.
Ahoana ny fomba ahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra?
Ted 3: Ny zava-drehetra momba ny fanavaozana sy fanafoanana ho an'ny 2021!
Nippon Marathon 2 – Izay rehetra fantatsika hatreto
tranokala video tsy voasakana ao an-tsekoly
nvidia geforce nisy zavatra tsy nety
karazana putlocker mahafinaritra
tranonkala playlist mozika maimaim-poana
mpilalao mozika maimaim-poana amin'ny android
afaka maka kik amin'ny pc ve ianao